Caymiska Baabuurka / Minnesota.gov
Caymiska baabuurta waxa uu kaa ilaalin karaa adiga kharashka shilka ama dhaawaca, laakiin waxaad u baahantahay inaad yeelato daboolida saxda ah. Ganacsigu halkan ayuu u jooga inuu kugu caawiyo inaad ka faa’iidaysato caymiska addoo iibsanaya qadarka saxda ah ee daboolida iyo xaalada shilka, dejinaya sheegasho oo dib ugu noqonaa jidkii.
Waxaad u baahantahay inaad ogaato:
Caymiska Baabuurka , waxa u baahan sharciga Minnesota oo haddii aad qabto amaahda baabuurka, amaahiyahaagu sidoo kale waxa uu u baahanyahay daboolid caymis.
Xeerarku waxay u kala duwanaan doonaan waxa dhaafsiisan waxa uu sharcigu u baahanyahay iyo xeerka kastana waxa uu xadayno ku yeelan doonaa waxay daboosho iyo ilaa xadka ay gaadhsiisantahay.
Xeerkaagu waa la tirtiri karaa haddii aanad bixin lacagta caymiska, si khaldan u metesho ama aad ku guul daraysato inaad muujiso macluumaad gaar ah.
Nidaamka aan Khaladka lahayn gudaha Minnesota
Xeerka Caymiska Baabuurta Aan Khaladka lahayn ee shirkada caymisku bixiso khasaaraha ee Minnesota waxay uga baahantahay dadka degen wakhtiyadoo dhan inay joogteeyaan dheefaha khasaaraha dhaqaale ee muhiimka ah iyo masuuliyada daboolida baabuurtka (sidoo kale loo yaqaano Dhowrista Shakhsiyeed ee Dhaawaca ama PIP) baabuurta ay leeyihiin, haddii isticmaaalka gaadhiga la baadho oo mid ka mid ah kuwan soo socdaa ay runtahay::
Baabuurka waxaa looga baahanyahay in lagu diiwaangeliyo ama uu ruqsada lagu siiyo Minnesota, ama
Baabuurku mabda’ ahaan waxa uu ku jiray Minnesota
Mar labbaad, Xeerku sidoo kale waxa uu uga baahanyaay dadka aan degenayn Minnesota inay sii wataan PIP iyo masuuliyada daboolida baabur kasta oo kale oo la leeyahay mar kasta oo qofka aan degenayn uu kaxaysto tan buubuurka xadadka Minnesota.
Intaa waxa dheer, shirkado ku qoranFoomka Caddaynta aan Khaladka ahayn waxay si rasmi ah u aqbaleen inuu siiyo Minnesota dheefaha aan khaladka ahayn kuwooda aan Minnesota caymiska kaga jirin cidii kuwan caymiska ku jiraa ay shil galaan marka ay baabuurka kuwataan gudaha Minnesota..
Xaqiiqooyinka Caymiska aan Khaladka lahayn
Khalad ma jiro waa Dhowriska Shakhsiyeed ee Dhaawaca (PIP) ee xeerkaaga, wakhtiyada qaarkood loo tixraaco sida Khasaaraha Dheefaha Dhaqaalaha Aasaasiga ah.
Haddii lagu dhaawaco shil, qaybtan xeerkaaga ayaa adiga lacagta ku siisa iyo xubnaha qoyskaaga, gudaha xadadka la sheegay, ee kharashka caafimaadka, mushaharka lumay, iyo adeegyada beddelka ah, Kharashkan waa la bixiyaa macno ma leh cidda khaladka gashay .
Daboolida aanu khaladka jirin waxaa loo adeegsadaa keliya kaharashka ka yimaada dhaawacyada ku gaadha shilka. Macnaheedu maaha in shirkadaha caymisku ay dabooli doonaan khasaaraha shilka iyaddoon loo eegin cidda khladka gashay.
Sheegashooyinka khalad ma jiro waxaa lagu sameeyaa PIP gaaga. Haddii kharashaadka ay cadaato markaa ay ka waynaadaan xadka PIP ee xeerkaaga, ama aad gaadho meesha la caddeyeyay, waxaad samayn kartaa sheegasho ku lid ah daboolida masuuliyada darawalka kale haddii la helo inuu masuul ka yahay sharci ahaan.
Daboolida ugu yar ee khalad ma jiro waa$40,000. Qaddarka loo heli karo qof kasta oo ku dhaawacan shil kasta; $20,000 waxaa loo oggolyahay kharashaadka caafimaad iyo $20,000 waxaa loo isticmaali karaa kharashaadka aan caafimaadka ahayn. Daboolida dhaafsiisan qadaran ugu yar waxaa lagu iibsan karaa.
Khalad ma jiro caadi ahaan looma adeegsado shilalka marka aad fuushantahay mooto ama mootada barafka. Waa inaad iibsataa xeerka caymiska goonida ah ee daboolaya baabuurtan, oo xeerarku kuma jiri doonaan dhowriska shakhsiyeed ee dhaawaca. Daboolida PIP ee mootada barafka ama mootiyinka waxaa, si kastaba ha ahaatee, loo iibsan karaa si gooni ah.
Sheegashada aan khaladku jirin waa in lagu sameeyaa gudaha lix bilood oo shilka ah. Waa inaad ku dartaa caddaynta caymiska, fadlan dhammaystir codsiga dheefaha, oo u gudbi baadhitaanka caafimaad haddii la codsado. Biilasha waa in loo gudbiyaa shirkada caymiska markay yimaadaan.